‘परम्परागत गहनाको आर्कषण झन् बढेको छ’ - Arthapage
‘परम्परागत गहनाको आर्कषण झन् बढेको छ’
प्रकाशित मितिः २२ मंसिर २०७५, शनिबार ०९:२४ December 8, 2018
रामजी बिक अध्यक्ष नेपाल सुनचाँदी कालिगढ टे«ड युनियन, बाँके
सुन खरिद गर्नेले त्यसलार्य कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा ध्यान दिएकै हुन्छ । कालिगढहरुले ग्राहकहरुको त्यही रुचीलाई बिशेषरुपमा ध्यान दिएर कलात्मक गहना बनाउने काम गर्छन । सुनलाई कुन ढाँचामा बनाउदा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने हेक्का राखिन्छ ।
सुनका धेरै प्रकारका गहना बन्छन् । त्यस्ता गहनाहरु ल्गाउने उमेर पनि फरक हुन्छ र समय पनि । पर्व बिशेषमा लगाउने गहनामा पनि हुन्छन् । बिहे भएकाले लगाउने र नभएकाले लगाउने पनि हुन्छन् । गहनाहरु आधुनिक र परम्परागत छन् । आधुनिकमा झुक्का, झाला, रिगं आदि छन् । अलि मोडिफाईड गरेका चुराका बालाहरु पनि धेरै चल्तीमा छन् । बिवाहित र अविवाहितका लागि खास छन् । परम्परागतमा तिलहरी, जन्तर, मारवाडी, शिरफुर, करा आदि छन् । जो वर्षौ पहिलेदेखि समाजमा चलिरहेका छन् । जसलाई नेपाली टिपिकल गहना पनि भन्दा हुन्छ । हाम्रा बिवाहमा यस्ता गहनाको धेरै प्रयोग भएको पाईन्छ ।
नेपाली परम्परागत गहनाको क्रेज घटेको छैन । बरु बढेको छ । कालिगढहरुले पनि समय सुहाउँदो बनाउने प्रयत्न गर्नुभएको
छ । नेपाली गहनालाई नयाँ पुस्तालाई मनपर्ने गरी परिमार्जित गर्ने कामहरु भएका छन् । पचास वर्ष अघि धेरै प्रयोग हुने जन्तर अहिले धेरैले लगाउछन् । तिलहरीको कुरा पनि त्यस्तै छ । नेपाली गहनाले बिशेष अर्थ राख्छ । यसको आफ्नै मौलिकता रहेको छ । यसलाई कसैले पनि बिस्तापित गर्न सक्दैन । बरु हामीले यसलाई परिमार्जित तरिकाले लैजानुपर्छ । त्यसमा सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
प्रकाशित मितिः २२ मंसिर २०७५, शनिबार ०९:२४ |
Prevजीवन बिमा किन गर्ने ? बीमा गर्दा के फाइदा हुन्छ ?
Nextथारु समूदायको लोपन्मुख गहना कवाडमा बिक्री